Itoobiya: Ra’iisal Wasaare Desalegn oo si lama filaan ah isu casilay maanta – Kasmo Newspaper
Updated - February 15, 2018 4:07 pm GMT
London (Kasmo), Ra’iial Wasaarihii Itoobia, Xaile Maryam Desalegn Boshe, ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay maanta in uu xilkii iska casilay, taas oo daba socota cabashooyin isa soo taraya oo xukuumadda looga soo horjeeday muddooyinkii dambe oo idil.
Desalegn oo xilka qabtay bishii Agosto 2012, hadal kooban oo uu ka jeediyay Tv-ga Dawladda wuxuu ku sheegay in istiqaaladdiisu u gogolxaari doonto isbeddel ka dhaca dalka, ‘su’aalaha dadweynuhuna jawaabo u baahanyihiin’.
Hoggaamiyahan 53 jirka ah, intii u dhexaysay 2010-2012kii wuxuu soo qabtay xilka Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo ku-xigeenka Ra’iisal Wasaaraha, xilligii hoggaamiyihii hore, Meles Zenawi, oo xilka uu ka dhaxlay, kaas oo geeriyooday 20kii Agosto 2012kii.
Ku-dhawaaqistiisu waxay ku soo beegmaysaa xilli xiisad gaar ahaaneed ka aloosantahay dalka, iyada oo toddobaadyadii u dambeeyay Xukuumaddu sii daysay boqollaal maxaabiistii siyaasadda, si xaaladda loo qaboojiyo.
Kacdoommada qowmiyadaha Oromia iyo Amxara ku codsanayaan xorriyado dheeraad ah iyo iska horimaadyo qowmiyadaha dhexdooda ah ayaa gilgilay dalka, kuwaas oo dhaliyay geerida boqollaal qofood iyo kumannaan loo taxaabay xabsiyada.
Ra’iisal Wasaaraha qudhiisa ayaa bilowgii sannadkaan ku dhawaaqay in dimuqraadiyadda la gaarsiin doono dadka oo idil, waxaana sababtaas darted loo sii daayay dhowaan dad gaaraya 6,500 oo mucaarad u badan.
Xukuumadda Addis Ababa waxaa marar badan lagu eedeeyaa cabburinta mucaaradka iyo madaxbannaanida Warbaahinta, iyada oo loogu marmarsiinyoodo sababo dhanka nabadgalyada la xiriira.
Mucaaradka oo aan wax matalaad ah ku lahayn Barlamaanka ayaa Xukuumadda ku eedeeya cagajuglayn joogto ah, laakiin mas’uulinta talada haysa ayaa eedahaas dhinacooda iska fogeeya.
In kasta oo xasillonidarro siyaasadeed ka jirto, Itoobiya wali waxaa lagu tilmaamaa dal ku tillaabsaday koboca dhaqaale ee ugu xawaaraha badan Gobolka.